Xildhibaan Cabdi Cali oo ka hadlay muddo kororsiga ee baarlamaanka | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Xildhibaan Cabdi Cali oo ka hadlay muddo kororsiga ee baarlamaanka
Xildhibaan Cabdi Cali oo ka hadlay muddo kororsiga ee baarlamaanka
Waxaa mudooyinkaan dambe jirtay hadalheyn xoogan taasoo ku aadan in Baarlamaanka Soomaaliya uu doonayo mudo kororsi labo sano ah, taasoo sababteedana loo casilay Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Mudane Xasan Cali Kheyre.
Hadaba Xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in Baarlamaanka uu rabo muddo kororsi, isagoona caddeeyay in Baarlamaanka aanu awood u aheyn inuu muddo kororsi iska sameysto, iyadoo aan la qancin shacabka.
Xildhibaanka oo wareysi siiyay Taleefishinka Dalsan ayaa sheegay in ayadoon wax ogolaansho laga heysan shacabka aysan suurogal aheyn in Baarlamaanka yiraahdo waxaan rabnaa mudo kororsi.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale Mucaaradka Dowlada ku eedeeyay iney iyaga abuurayaan wararkaan la isla dhexmaraayo oo ay dano gaar ah ka leeyihiin balse Baarlamaanka qorshahaasi uusan marnaba wadan, waa siduu hadalka u dhigaye.
Arintaan mudo kororsiga ayaana hadal-heynta ugu xoogan ee waqtiyadii dambe aheyd gaar ahaan tan iyo markii la casilay Ra’iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Kheyre.